Numeri 9 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
9 Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses entlango yaseSinayi ngonyaka wesibini wokuphuma kwabo ezweni laseYiputa, ngenyanga yokuqala,+ esithi: 2 “Ngoku oonyana bakaSirayeli bafanele balungiselele umbingelelo wepasika+ ngexesha lawo elimisiweyo.+ 3 Nowulungiselela ngomhla weshumi elinesine kule nyanga phakathi kweengokuhlwa ezimbini+ ngexesha lawo elimisiweyo. Nize niwulungiselele ngokwemimiselo yawo yonke nangokwenkqubo yawo eqhelekileyo yonke.”+ 4 Wathetha ke uMoses koonyana bakaSirayeli ukuba bawulungiselele umbingelelo wepasika. 5 Bawulungiselela ke umbingelelo wepasika ngenyanga yokuqala, ngomhla weshumi elinesine lwenyanga leyo phakathi kweengokuhlwa ezimbini, entlango yaseSinayi. Njengako konke uYehova awamyalela kona uMoses, benjenjalo oonyana bakaSirayeli.+ 6 Ke kaloku kwakukho abantu ababengahlambulukanga ngenxa yomphefumlo womntu+ kangangokuba abazange babe nako ukulungiselela umbingelelo wepasika ngaloo mhla. Ngoko ke basondela phambi koMoses noAron ngaloo mhla.+ 7 Bandula bathi aba bantu kuye: “Asihlambulukanga ngenxa yomphefumlo womntu. Sithintelwa ngani na ukuba singasondezi umnikelo+ kuYehova ngexesha lawo elimisiweyo phakathi koonyana bakaSirayeli?” 8 Wathi uMoses kubo: “Yimani phaya, khe ndive ukuba uYehova woyalela athini na ngani.”+ 9 Wandula ke uYehova wathetha kuMoses, esithi: 10 “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi, ‘Nakuba nawuphi na umntu kuni okanye kwizizukulwana zenu esenokungahlambuluki ngenxa yomphefumlo+ okanye athabathe uhambo olude, naye umele awulungiselele umbingelelo wepasika kuYehova. 11 Bowulungiselela ngenyanga yesibini,+ ngomhla weshumi elinesine phakathi kweengokuhlwa ezimbini. Bafanele bawudle kunye namaqebengwana angenagwele nemifuno ekrakra.+ 12 Bamele bangashiyi nto kuwo kude kuse,+ bangaphuli thambo lawo.+ Bowulungiselela ngokommiselo wonke wepasika.+ 13 Kodwa ukuba umntu ohlambulukileyo nongekho seluhambeni othe akakukhathalela ukulungiselela umbingelelo wepasika, loo mphefumlo umele unqunyulwe ungabikho phakathi kwabantu bakowawo,+ ngokuba awuwusondezanga umnikelo kaYehova ngexesha lawo elimisiweyo. Loo mntu wophendula+ ngesono sakhe. 14 “‘Ukuba umphambukeli uthe wahlala nani njengomphambukeli, naye umele awulungiselele umbingelelo wepasika kuYehova.+ Ufanele awenze ngokommiselo wepasika nangokwenkqubo yawo eqhelekileyo.+ Ummiselo woba mnye kuni, kokubini kumphambukeli nakwinzalelwane yelizwe.’”+ 15 Ngomhla wokumiswa komnquba+ ilifu lawugubungela umnquba wentente yeSingqino,+ ngokuhlwa lalisiba njengembonakalo yomlilo+ phezu komnquba kude kuse. 16 Leyo yindlela oku okwakuqhubeka ngayo rhoqo: Ilifu laliwugubungela emini, libe yimbonakalo yomlilo ebusuku.+ 17 Xa sukuba linyuka ilifu lisuke phezu kwentente, babenduluka oonyana bakaSirayeli emva koko,+ yaye apho lalisithi zinzi khona ilifu, babemisa khona iinkampu zabo oonyana bakaSirayeli.+ 18 Oonyana bakaSirayeli babenduluka ngokomyalelo kaYehova, yaye babemisa iinkampu+ ngokomyalelo kaYehova. Zonke iintsuku elalithe zinzi ngazo ilifu phezu komnquba, babehlala bemise iinkampu. 19 Yaye xa ilifu lihleli ithuba elide phezu komnquba, babeyigcina imfanelo yabo kuYehova oonyana bakaSirayeli ngokuthi banganduluki.+ 20 Maxa wambi ilifu lalihlala iintsuku ezimbalwa phezu komnquba. Ngokomyalelo+ kaYehova babehlala bemise iinkampu, yaye babenduluka ngokomyalelo kaYehova. 21 Maxa wambi ilifu+ lalihlala ukususela ngokuhlwa kude kuse; yaye laliphakama ilifu elo kwakusa, baze banduluke. Enoba ilifu laliphakama emini okanye ngokuhlwa, babenduluka nabo.+ 22 Enoba ilifu lalihlala iintsuku ezimbini okanye inyanga okanye iintsuku ezingakumbi phezu komnquba, babehlala bemise iinkampu oonyana bakaSirayeli, banganduluki, kodwa ekuphakameni kwalo babenduluka.+ 23 Babemisa iinkampu ngokomyalelo kaYehova, yaye babenduluka ngokomyalelo kaYehova. Bayigcina imbopheleleko+ yabo kuYehova ngokomyalelo kaYehova ngoMoses.+